အပြာဖျော့ အစက် – Pale Blue Dot – Carl Sagan (ဘာသာပြန်သူ – ကိုမိုး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » အပြာဖျော့ အစက် – Pale Blue Dot – Carl Sagan (ဘာသာပြန်သူ – ကိုမိုး)
အပြာဖျော့ အစက် – Pale Blue Dot – Carl Sagan (ဘာသာပြန်သူ – ကိုမိုး)
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 13, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources | 18 comments
Carl Sagan ဘာသာပြန်
အပြာဖျော့အစက် သည် ကမ္ဘာမှ အဝေးဆုံး စံချိန်တင် မိုင် သန်းပေါင်း ၃,၇၀၀ (ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း ၆,၀၀၀) ခန့် အကွာအဝေး မှ ဗွိုင်ယေဂျာ အမှတ်(၁) အာကာသယာဉ် ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော နေစကြာဝဠာ၏ မိသားစုဓာတ်ပုံများ ပုံတွဲထဲမှ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဓာတ်ပုံ ၏ အမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤဓာတ်ပုံ တွင် မြေကမ္ဘာကို အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှ အစက်ကလေး တစ်စက် အဖြစ်သာ တွေ့မြင်ရပါသည်။
နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင် ကားလ်ဆေဂန် (Carl Sagan) ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက် အရ အဓိက ရည်မှန်းချက် ပြီးဆုံး၍ နေစကြာဝဠာမှ ထွက်ခွာလျက်ရှိသည့် ဗွိုင်ယေဂျာအမှတ် (၁) အာကာသယာဉ် ကို ကင်မရာ နောက်ပြန်လှဲ့၍ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ပုံကိုရိုက်ရန် နာဆာ (NASA) မှ အမိန့်ပေး ရိုက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကားလ်ဆေဂန် က ဤဓာတ်ပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် နက်ရှိုင်းမှု သူ၏ အတွေးအမြင်ကို သူ၏ “အပြာဖျော့အစက် – အာကာသထဲမှ လူသားအနာဂါတ် ၏ ပုံရိပ်” စာအုပ်ထဲတွင် ဤကဲ့သို့ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အလွန်ဝေးကွာ၍ မြင်သာသော အာကာသ တစ်နေရာမှ ကြည့်ပါလျှင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမည့်ပုံ ပေါ်ကောင်း မှ ပေါ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ တမူ ထူးခြားပါသည်။
ထို အစက်ကလေး အကြောင်းကို ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထို အစက်ကလေးသည် ကျွန်တော်တို့၏ နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို အစက်ကလေးသည် ကျွန်တော်တို့၏ အိမ်ဂေဟာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို အစက်ကလေးသည် ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထို အစက်ကလေးပေါ်တွင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူများ အားလုံး၊ သိကျွမ်းဖူးသူများ အားလုံး၊ ကြားဖူးသူများ အားလုံး၊ ရှေးပဝေသဏီမှစ၍ လူသားများအားလုံး သူတို့၏ သက်တမ်းတလျှောက် ဤအစက်ကလေးပေါ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ပျော်ရွှင်မှုသုခများ နှင့် ဒုက္ခဝေဒနာများ ၏ အပေါင်းအစု၊ ထောင်ပေါင်း များစွာသော ဘာသာရေးများ၊ နိုင်ငံရေး အယူဝါဒများ နှင့် စီးပွါးရေးအယူဝါဒများ၊ မုဆိုးများ နှင့် အစာရှာသူများ၊ သူရဲကောင်းများ နှင့် သူရဲဘောကြောင်သူများ၊ မြို့ပြနိုင်ငံကို တည်ထောင်သူများ နှင့် ဖျက်ဆီးသူများ၊ ဘုရင်များ နှင့် မြေကျွန်များ၊ ချစ်သူ လူငယ်စုံတွဲများ၊ မိခင် နှင့် ဖခင်များ၊ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့် ကလေးငယ်များ၊ တီထွင်သူများ နှင့် စွန့်စားသူများ၊ စာရိတ္တသင်ခန်းစာ တရားဟော ဆရာများ၊ အကျင့်ပျက် နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နံမည်ကျော် စူပါစတား ဆိုသူများ၊ ကြီးမြတ်သော ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆိုသူများ၊ ကျွန်တော်တို့ လူသားများ၏ သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှ သူတော်စင်များ နှင့် အကုသိုလ်ကောင်များ ဤသူများ နှင့် ဤအရာများ အားလုံးသည် နေရောင်ခြည် အလင်းတန်းကလေး တစ်ခုထဲတွင် မျောပါနေသော ဤ အမှိုက်ကလေးတစ်စ ပေါ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤကမ္ဘာသည် ဧရာမ အာကာသပွဲကွင်းကြီး ထဲမှ အလွန်သေးငယ်သော ဇာတ်ခုံကလေး တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုန်းတန်ခိုးအာဏာ နှင့် အောင်ပွဲခံချိန်၌ အစက်ကလေး တစ်ခု၏ အစိတ် အပိုင်းကလေးကို ခဏတာမျှ ပိုင်စိုးနိုင်ရန် အတွက် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးများ နှင့် သူတို့၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက စီးဆင်းစေခဲ့သော သွေးမြစ်နဒီများကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ထို ဓာတ်ပုံပေါ်မှ အစက်ကလေး၏ ထောင့်တစ်ထောင့်တွင် နေသူများမှ အခြား ထောင့်တစ်ထောင့်တွင် နေထိုင်သော မသိမသာမျှသာ ကွဲပြားခြားနားသည့် သူများ အပေါ်တွင် အဆုံးမရှိအောင် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ကြသည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
သူတို့တတွေ နားလည်မှု မည်မျှလောက် ခဏခဏ လွဲကြပါသနည်း၊ သူတို့တတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ် မည်မျှလောက် ပြင်းပြ နေကြပါသနည်း၊ သူတို့တတွေ၏ မုန်းတီးမှုများသည် မည်မျှလောက် ပြင်းထန်ပါသနည်း။
ကျွန်တော်တို့၏ ဟိတ်ဟန်ထုတ်မှုများ၊ ကျွန်တော်တို့၏ မိမိကိုယ်မိမိ အရေးကြီးသည်ဟု ထင်မြင်မှု၊ ဤစကြာဝဠာထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ကသာ အခွင့်ထူးရသည် ဟု ယုံမှားလွန်သော စိတ်ဝေဒနာ ဤအရာများ အားလုံးကို ဤ အလင်းဖြော့ အစက်ကလေးမှ စိန်ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဂြိုဟ်သည် လွှမ်းခြုံထားသော မဟာအမှောင်တိုက် အာကာသထဲမှ အထီးကျန် အစက်အပြောက်ကလေး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အာကာသထဲတွင် အညတရ ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်တင်ရန် အာကာသ၏ အခြား တစ်နေရာမှ လာ၍ အကူအညီ ပေးလိမ့်မည်ဆိုသော သဲလွန်စ မတွေ့ရပါ။
ယခုအချိန်အထိ သိရှိချက်များအရ ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်သာ တစ်ခုတည်းသော သက်ရှိများ ခိုလှုံရာ ကမ္ဘာ ဖြစ်ပါသည်။
အနဲဆုံးတော့ ရှေ့မကြာမီ အနာဂါတ်ကာလ အတွင်းတွင် ကျွန်တော်တို့ လူသားများ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စရာ အခြား ဂြိုဟ်ကမ္ဘာတစ်ခု မရှိပါ။ အလည်အပါတ် သွားရောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ ယခု အခိုက်အတန့်တွင် ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဤ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ရာ နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
နက္ခတ္တဗေဒသည် မာန်မာန လျော့ကျစေသော၊ အကျင့် ပြည့်ဝစေသော ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားခဲ့ပါသည်။
လူသား၏ မောက်မာ ထောင်လွှားခြင်းများ၏ ရူးသွပ်ပုံကို ဤ ကမ္ဘာဂြိုဟ် သေးသေးကလေး ၏ အဝေးမြင် ပုံရိပ်ထက် ပို၍ကောင်းအောင် သရုပ်ဖော်ပြနိုင်သောအရာ ရှိကောင်းမှ ရှိပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဤဓာတ်ပုံသည် တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် ပို၍ အကြင်နာထား ဆက်ဆံဖို့ နှင့်
ကျွန်တော်တို့၏ တစ်ခုတည်းသော အိမ်ဂေဟာ ဤ အပြာဖျော့အစက်ကလေး ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားဖို့
ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပုံကို လေးလေးနက်နက် ထောက်ပြနေပါသည်။
၁။ ဝီကီပီးဒီးယား အခမဲ့ စွယ်စုံကျမ်း http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot
၂။ ယူတျု ဗီဒီယို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက် ၂၀၁၃ ၁၉:၅၅ နာရီ ယူတီစီ http://youtu.be/8Lm6pEhykhs
Sagan pointed out that “all of human history has happened on that tiny pixel (shown here insideablue circle), which is our only home” (speech at Cornell University, October 13, 1994)
Pale blue dot transcript – Carl Sagan
The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization,
every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,”
every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there — onamote of dust suspended inasunbeam.
Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy isahumbling and character building experience.
ရေပွက်ပမာ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ လေး လဲ ရှိခဲ့တာပါဘဲ။
ဘဝ တိုတို လေးထဲ မှာ ကိုယ့် အတ္တတွေ နဲ့ မောဟ ရန်ပွဲ ၊ စစ်ပွဲ တွေကြားမှာ အနစ်ခံ နေကြရတာ။
ကမ္ဘာ အနှံ့ မှာ ဒီလို အသိတရားမျှပေးတဲ့ စာတွေ၊ စကားတွေ မပြတ် ရှိနေလဲ အမှောင်တိုက်ထဲ မျက်စိနား မပွင့်နိုင်နေကြ တော့ လဲ ကိုယ်ချင်းမစာတတ် တဲ့ စိတ်တွေ ကနေ အမုန်းတွေ ပြန့်နေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။
အချိန်ပေးပြီး ဘာသာပြန်မျှဝေပေး တဲ့ ကိုမိုး နဲ့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူ အားလုံး ကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးပါ။
အရီးရေ ခင်ခရဲ့ အနီရောင်ပိုမိုရှင်းကာလတွင်းမို ဒီအနီ၂ခုကို မှတ်တမ်းယူသွားတယ်ဗျ။
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ဖို့ အတွက်
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ အနန္တစကြာဝဠာ ဆိုတာကို ဒါက သက်သေပြလိုက်တာပါ အရီးရယ်။ ဒါလေးဟာ လူတစ်ယောက်ကို သိပ်ပြီး သံဝေဂ ရစေတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထု ဒြပ်တွေနဲ့တောင် ဒီလို စကြာဝဠာတွေ ဘလက်ဟိုး တွေကို ရှာတွေ့နိုင်သေးရင် ရုပ်ထက်အဆများစွာ စွမ်းအားထက်တဲ့ ဥာဏ်ပညာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟာ စကြာဝဠာတခွင်လုံးကို ဥာဏ်နဲ့ စေစားနိုင်တယ် ဆိုတာ ယုံကြည်စရာဖြစ်ပါတယ်။
မပြုံးဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာကို နက်ရှိုင်းစွာ သက်ဝင်သူပါ။ သို့သော် ကိုယ့်လိုဘဲ လူများစု ဟာ ဒီဘ၀မှာ နိဗာန် မရောက်နိုင်၊ မရောက်နိုင်တာကို အတင်းလုပ်တော့ ဂွကျပြီး လူမှုဘ၀တည်ဆောက်မှုမှာ စည်းဘောင် ပြတ်ပြတ်သားသား မကွဲဘဲ လူမှုဘ၀မှာ မအောင်မြင်ဖြစ်မယ်။ ဘာသာရေးဟာ လူနည်းစု (အနည်းဆုံးလူနည်းစု) အတွက်ပဲ ကောင်းပြီး လူများစုအတွက်ကတော့ ဘာသာရေးကင်းလွတ်တဲ့ ဒီမိုကျကျ အတွေးအခေါ်သာ သင့်လျော်မယ် လို့ လက်ခံထားသူပါ။ ဘာသာရေးဟာ လူ့ဘောင်ကို မြှင့်တင်မပေးနိုင်ပါ။ မသုံးတတ်ရင် ဆေးမဖြစ်ဘဲ ဘေးဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးနဲ့ ကင်းကင်းနေတယ်။ တနေ့မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်မယ်။ ဒါမပြုံးရဲ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။ ပို့စ်နဲ့ သိပ်မဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေး ပြောတာ စိတ်မရှိပါနဲ့။
ဘာသာပြန်သူကိုမိုးနဲ့ မျှဝေသူမလတ်တို့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတာ တရားအပုဒ်ပေါင်းများစွာကို နာလိုက်ရသလိုပဲ။
အဝေး က ကြည့် ပြီး
အနု စိတ် သုံး သပ်ပုံ ဆို တော့။
အနီးကပ် နေပြီး သုံးသပ် တာလောက်တော့
မနီး စပ်ဘူး လို့ ခံစားရပါတယ်။
အင်း တကယ်တော့ ကျနော်တို့နေတဲ့ ကမ္ဘာက နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီ ထဲမှာဆိုရင် အသေးကွေးဆုံးလေးတွေ ထဲမှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အသေးကွေးဆုံးလေးပေါ်က လူတွေရဲ့ စိတ်ထားကတော့ အင်မတန် မြင့်မောက်ပါတယ်။
စစ်ပွဲတွေလုံးဝ ကင်းသွားဖို့တော့ မလွယ်သေးပါဘူး။ ရှိတော့ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ကျောက်ခေတ်ကြည့်ကြည့် ကြေးခေတ်ကြည့်ကြည့် သံခေတ်ကြည့်ကြည့် စက်မှုလက်မှုခေတ်ကြည့်ကြည့် ရရာလက်နက်နဲ့ စစ်တိုက်ခဲ့တာချည်းပဲ။ စစ်ဖြစ်နေရင်းပဲ လူသမိုင်းကြီး တိုးတတ်လာတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ စစ်တိုက်ဖို့ တီထွင်မှုတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို ခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာစစ်လို သွန်ပြီးတိုက်တဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးနီးပါး ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ စစ်တွေတော့ ပေါ်ဖို့ သိပ်မလွယ်တော့ပါဘူး။ လူ့အသိဥာဏ်လေးကပဲ ပြန်ထိန်းသွားတယ်။ ဖြစ်ရင် အားလုံးသေကုန်မှာ သေချာတာကိုး။ ကြိုကြား ကြိုကြား ဒေသအလိုက် ကွက်ပြီး ဖြစ်နေတာလေးတွေတော့ ရှိနေဦးမှာပေါ့။
အဲဒီ လူ့အသိဥာဏ်ကလေးကပဲ ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်ရှောက်မှာပါ။
ဒီရက်မှာပဲ.. ဗွိုင်ယေဂျာက. .နေစင်္ကြာဝဌာကထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေ…ကြားရဖတ်ရတယ်..
အဲဒီမှာတတ်ထားတဲ့.. အင်ဂျင်က.. အခုမားစ်မှာသုံးတဲ့..ယဉ်နဲ့တူတဲ့.. နှူပါဝါသုံးအင်ဂျင်ပဲ..
နေစင်္ကြာဝဌာထဲ.. . ကြယ်ကြီးဖြစ်တဲ့.. မိခင်နေမင်းတောင်.. အချိန်တန်ကြွေပျက်မှာပါတဲ့..
အဲလိုကြယ်တွေ.. ကုဋေများစွာစုနေတာကို.. ဂလက်စီ (နဂါးငွေ့တန်း)လို့ခေါ်ပါတယ်..
အခုထိ သိပ္ပံတွေ့ထားသလောက်တော့.. စင်္ကြာဝဌာထဲ.. နဂါးငွေတန်းတွေလည်း.. ကုဋေချီရှိတယ်တဲ့..
သတ္တ၀ါနေလို့ရတဲ့.. ဂြိုလ်တွေလည်း.. ကုဋေပေါင်းများစွာရှိမှာသေချာပါတယ်…
တလောကလေးတင်.. ကမ္ဘာတူဂြိုလ်တွေတလုံးပြီးတလုံးတွေ့နေတာ.. နာဆာကကြေငြာနေတာပဲ..
Voyager 1 just left the solar system using less computing power than …
Washington Post (blog)-19 hours ago
Voyager I just became the first man-made object to reach interstellar space — and it’s running on technology that’s decades older, slower and …
Super-Earth 40 light years away ‘is rich in water withathick, steamy …
Daily Mail-Sep 5, 2013
မြတ်စွာဘုရားသခင် က ဟောခဲ့ပါတယ်
အနန္တ စကြာဝဋ္ဌာ ပါ ဆို
ငါသာလျှင်…. ဆိုတဲ့ မာနထောင်လွား နေသူတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာစုလေးပါပဲ..။ share ပေးတဲ့ အရီးလတ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရီးလတ် ပြောသလိုပဲ တကယ်တော့ ရေပွက်ပမာပါ..။ လူသားတွေဟာ အသိပညာမြင့်မားပ
လာကြပေမဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ခေါင်းပါးလာကြတယ်..။ လူသားတွေရဲ့ တီထွင်မှု တွေ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ
တိုးတက်လာပေမဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ လျော့ပါးလာကြတယ်။ မှန်ကန်ပြီး လိုက်နာသင့်တဲ့ ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေရှိပေမဲ့လည်း
ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးတဲ့ အစွဲတွေနဲ့ အချင်းချင်း အမုန်းပွားကြတယ် ။ ။အထူးသဖြင့် သော်တာတို့ရဲ့ ရွှေနိုင်ငံကြီးက လူတွေပေါ. (ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ထောင်းတော့ နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့ :P)။
အရီးရေ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ ကိုယ်စီရှိသင့်တယ်။ မလုံခြုံမှုနဲ့သံသယတွေရှိနေသမျှ စစ်ပွဲတွေ အနည်းနဲ့ အများရှိနေမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ အတ်တတွေနည်းနည်းလျှော့ပြီး တစ်ဖက်သားပေါ်နည်းနည်းမုဒိတာပွားနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ။ မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်ပွဲတွေ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းတဲ့ ခရီးသွားဇုံတစ်ခုအဖြစ်အရမ်းမျှော်လင့်နေဆဲပါ။ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ်ပြန်ပစ်နေရတဲ့ လက်တွေလဲ တုန်လှုပ်နေလောက်ပါပြီ။ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း အားလုံး အတူတူပါ။ လူမျိုးရေးထက် နိုင်ငံရေးကိုရှေးရှုကြရင် ပိုစည်းလုံးကြရမှာ။ ကမ်းလင့်တဲ့ လက်တွေဟာလဲ ယုံကြည်မှုနဲ့နွေးထွေးခိုင်မြဲနေသင့်တာ။ အပေးအယူဆန်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုနောက်မှာ အတ်တနဲ့ သံသယ ကရှိနေတတ်စမြဲပါ။
(တနင်းဂနွေ ဆစ်ဂနက်။။ဆေးမသောက်ရသေးလို့။ :))
အားဖြည့် ကာ ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြသူများ ဖြစ်တဲ့
ကိုစံလှကြီး နဲ့ သူကြီးမင်း
တို့ အားလုံး နဲ့တစ်ကွ အသံတိတ်အားပေးကြကုန် သော မင်းပိတ်သတ်ကြီး အားလုံး ကို ဘာသာပြန်သူ ကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
မှတ်ချက် တိုင်း အလွန်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။
အဲဒီတွေထဲက ရွာသူအသစ်ကလေး သော်တာ ကို ကြိုဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အသေအချာ အားဖြည့်ထားတာလေး ကို အရောင်ခြယ်ပေးလိုက်ပါရစေ။
နောက်လဲ ရွာ့ထဲကို မကြာမကြာ လာပြီး စကားပြောနော်။
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
ရွာထဲကို မကြာမကြာ လာပြီးစကားပြောနိုင်အောင် Post တွေလည်းတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
“နက္ခတ္တဗေဒသည် မာန်မာန လျော့ကျစေသော၊ အကျင့် ပြည့်ဝစေသော ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားခဲ့ပါသည်။”
ကြိုက်သဗျာ…ဘာသာပြန်သူကိုမိုးနဲ့ မျှဝေသူ ကိုခင်လတ်ကြီးတို့ကို ကျေးဇူးပါဗျို့ :))